Izikhungo okufinyeziwe - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Ukuthuthukiswa yokukhiqiza ubuchwepheshe kanye kwemvelo PCB bumbela inqubo uvumele abakhiqizi PCB ukuphrinta PCB ngokwezifiso yakhelwe futhi ukuletha amaklayenti zingakapheli izinsuku.
Standard PCB isikhathi Ukuhola
Lapha e-PCB Omangalisayo, isikhathi lead libhekisela esikhathini esizidingela ephrintiwe wesifunda amabhodi bumbela. It is abalwa kusukela ezinsukwini zokusebenza yesibili kulandele i-oda yakho yokukhokha kokwamukelwa isiqinisekiso ifayela. Sicela uqaphele ukuthi akubandakanyi ngamaholide noma ngezimpelasonto.
Ngokuvamile, isikhathi sethu phambili incike eyinkimbinkimbi wesifunda sakini design kanye nezidingo zakho. Sesikhathele efanela prototype amapulangwe 3-7 ngosuku. Njengoba for ukukhiqizwa PCB ejwayelekile, sinikeza 3 ongakhetha isikhathi phambili. Sicela ubheke Ithebula elilandelayo ukuze uthole ulwazi oluningiliziwe. Ungase ukhethe oyifunayo isikhathi sakho phambili lapho becaphuna ku-intanethi, sizobe abale PCB izindleko esekelwe edingekayo isikhathi sakho phambili ngendlela efanele.
PCB okufinyeziwe Izikhungo
Ukuhlola abanye amaphrojekthi Demand nesimiso sifushane, ikakhulukazi lapho uchitha isikhathi esiningi kuyi-PCB design noma kwi-engeneering esiteji futhi kudingeka ijahe ekukhiqizeni, sinikeza PCB okufinyeziwe Izikhungo ukukusiza ukuhlangabezana nomnqamulajuqu. Sesikhathele uyakwazi ukuphrinta PCB amabhodi akho efanayo izinga okusezingeni eliphezulu njengoba sathembisa wethu Standard PCB Services iqala kusukela 2 izinsuku. kwendibilishi uzobe kwenzeka zokusheshisa imiyalo yakho PCB.
Dinga PCB umyalelo ophuthumayo? Zizwe ukhululekile ukuxoxa izidingo zakho nathi nganoma wonderful@wonderfulpcb.com .